कहिले सहज होला खानेपानीको समस्या ? – Janamanch.com
कहिले सहज होला खानेपानीको समस्या ?
बागलुङ नगर क्षेत्रमा अहिले खानेपानीको समस्याले हाहाकार मच्चिएको छ । बागलुङ नगर क्षेत्र भित्र खानेपानीको व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउनको लागि पानीको वितरणको जिम्मा लिएको नगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था अहिले रमिते बनिरहेको छ । खानेपानीको समस्याले लामो समयदेखि नरबासीहरु पीडित भैरहँदा उक्त संस्थाका अध्यक्ष, प्रबन्धक लगायत कर्मचारीहरु नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्नुको सट्टा रमिते बनि रहेका छन् । नगर क्षेत्रको खासगरी महेन्द्रपथ आसपासका क्षेत्रहरु अहिले लामो समयदेखि समस्याग्रस्त क्षेत्रमा परिणत भएका छन् । खासगरी नगर खानेपानीको कार्यालयदेखि तलपट्टीको एरिया, बजार क्षेत्रको होटल राजन र मिलीजुली चोकहुँदै अञ्चल अस्पताल जाने रोड आसपासको बस्ती, महेन्द्रपथको बस्ती हल्लन चोकदेखि आवारोडहुँदै पुरानो बसपार्क जाने रोडको बस्ती लगायत अधिकांश बजार क्षेत्रमा लामो समयदेखि खानेपानीको अभाव देखिएको छ । यसरी दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको लामो समयसम्म अभाव भै रहँदा र बारम्बार संस्थामा जानकारीका साथै डेलीगेशन जाँदा समेत संस्थाको तर्फबाट समस्याको परिणाममुखी समाधानमा अग्रसरता देखिएको छैन ।
उसो त जब २०६४ साल माघ १७ देखि बागलुङ नगर खानेपानी कार्यालयलाई नगरपालिकाको मातहतबाट नगर खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थालाई हस्तान्तरण गरियो । त्यस बेलादेखि नै उक्त संस्थाद्वारा प्रदान गरिएका सेवा सुविधाप्रति नगरबासीहरु त्यती सन्तुष्ट छैनन् । विभिन्न समयमा उपभोक्ता संस्थाको सेवाप्रति नागरिकहरुको गुनासाको उचित सम्बोधन भएन । एकातिर बागलुङ बजारको बढ्दो जनघनत्व त अर्कोतर्फ बजारमा ल्याइएको खानेपानी मुहानको क्षमता कम भएका कारण उपभोक्ताहरु खानेपानीको समस्याबाट तड्पीरहनु प¥यो । जब यस बजार क्षेत्रको लागि पर्याप्त खानेपानीको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका साथ दोस्रो सानो शहरी खानेपानी योजना शुरुवात गरियो । तत्पश्चात उपभोक्तालाई त्यही योजनाको ललिपप देखाएर भुलाईयो । लामो समयको प्रतिक्षा पश्चात करिव १ वर्ष अगाडी देखि साना शहरी खानेपानी योजनाको पाइपलाइनमार्फत पानी वितरण भै रहेको छ । २४ सै घण्टा पानी वितरण हुने १० वर्षसम्म उपभोक्तालाई खानेपानीको समस्या नहुने भनि बहुप्रचारित योजनाबाट वितरित पानी अहिले ‘माछा–माछा भ्यागुतो’ भएको छ । यहाँनेर स्मरणीय कुरा के छ भने– बागलुङ नगर खानेपानी संस्थासँग पानीको वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने योजनाकार अर्थात् अनुभवी इन्जिनयरको अभाव छ । यो कुरा विगत लामो समयदेखि उपभोक्ता लगायत अन्य पक्षबाट समेत नगर खानेपानीले १ जना योग्य इन्जिनियर राख्नुपर्ने माग भै रहेको हो । त्यसैमा पनि २ वर्ष अगाडीको साधारणसभामा उपभोक्ताको तर्फबाट चर्को दबाव आए पश्चात तत्कालिन अध्यक्ष समाजसेवी के.वि. रानाको अध्यक्षतामा रहेको कार्यसमीतिले उपभोक्ता माझ संस्थामा एक जना दक्ष इन्जिनियर राख्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो ।
जब संस्थामा गत साल मात्र नयाँ सञ्चालक समिति चयन भयो । नेपाली काँग्रेसका पूर्वपार्टी सभापति तथा समाजसेवी नगरबासीको समस्याका जानकार हरि प्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ समिति निर्वाचित पनि भयो । उक्त समितिबाट नगरवासीहरुले पुरानो कार्य समितिको भन्दा छिटो–छरितो र भरपर्दो सेवाको आशा गरेका थिए । तर हरि प्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित समिति अहिले नगरबासीको समस्यामा ‘कुहिरो भित्र हराएको काग’ जस्तै भएको छ । नागरिक प्रति बफादारिता पटक्कै छैन । अध्यक्ष हरि श्रेष्ठ २–४ जना कर्मचारीको चौघेरामा सिमित रहेका छन् । कर्मचारीको पदोन्नती, सेवा सुविधा र उनीहरुको निर्देशन अध्यक्षले पालना गरिरहेका छन् । नागरिकहरुको खानेपानीको अभावमा उनको खासै चासो देखिदैन । उनको अध्यक्षतामा गठित कार्यसमिति पनि अर्को प्रतिबिम्वमा नै रमाई रहेको छ । उसो त अध्यक्ष श्रेष्ठ तथा अन्य पदाधिकारीहरु पनि खानेपानी वितरण सम्बन्धमा कुनै ज्ञान तथा दक्षता राख्दैनन् । आफुसँग कुनै क्षमता पनि नहुने र संस्थामा दक्ष इन्जिनियर पनि नराख्ने उनीहरुको मनसायमा संस्था भित्रकै कर्मचारीको हात रहेको अनुमान गरिएको छ । कुनै कर्मचारकिो रोजीरोटीको व्यवस्थाकै लागि खानेपानी वितरणमा नियमित र एकरुपता ल्याउनको लागि आवश्यक जनशक्ति संस्थाले राख्नबाट आलटाल गरी सम्पूर्ण उपभेक्ताहरु माथि खेलवाड गरेको नगरवासीहरु बुझाइछ । यसरी नयाँ पाइपलाइनबाट वितरीत खानेपानी वितरणको लेवल नमिल्ला, अहिले सम्पूर्ण नगर क्षेत्र भित्र नै खानेपानीको अभाव देखिएको छ । दैनिक रुपमा कुनै न कुनै टोलबाट नगरका उपभोक्ता खानेपानीको लागि डेलीगेशन गै रहँदा उपभोक्ताको माग सम्बोधन गर्नतर्फ न त समितिले तदारुकता देखाएको छ न त कर्मचारीहरुले नै ? अफिसमा गुनासाको लागि सम्पर्क गर्दा एकले अर्कोतर्फ देखाएर पन्छिने गरेको पाईएको छ । अध्यक्षलाई सम्पर्क गर्दा प्रबन्धक र प्रबन्धकले कर्मचारीलाई देखाएर पन्छिने गरेका छन् । यसरी नागरिकहरु खानेपानी जस्तो सम्बेदनशिल अत्यावश्यक बस्तुबाट महिनौं बञ्चित भैरहँदा समिति तथा कर्मचारी बेखबर भएर बसी दिँदा नागरिकहरु अन्योलमा परेका छन् । नागरिकहरु लामो समयसम्म खानेपानीको अभावले तड्पीरहँदा सम्बन्धित निकायहरु मौन रहनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
अहिले बागलुङ बजारमा बसोबास गर्ने नागरिकहरु हरेक समस्याबाट प्रभावित बनिरहेका छन् । विगत लामो समयसम्म जननिर्वाचित प्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारीद्वारा स्थानिय निकाय सञ्चालन हुँदा जवाफदेहिता नभएको गुनासो आइरहँदा अहिले जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् । तर पनि नगरवासीको समस्या जिहुँको तिहुँ छन् । अहिले नगरमा फोहोर व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या देखिएको छ । पुरानो सम्झौतानुसार स्थानिय रुक सहकारीले फोहोर व्यवस्थापन गरि रहेकोमा अहिले नगरवासीमा तिब्र असन्तोष पैदा भै फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ । नगरमा वितरीत खानेपानी व्यवस्थित र समान वितरण नहुँदा नागरिकहरु आन्दोलित बन्न पुगेका छन् । ढल तथा नालीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा पानी पर्दा पिचबाटो नै बगरमा परिणत हुन पुग्दछ । पछिल्लो पटक करको व्यवस्थामा गरिएको भारी वृद्धिले पनि व्यवसायीहरुमा आतंकको वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ । यसरी नगर क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने गृहिणीदेखि लिएर उद्योगी व्यवसायी लगायत शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी लगायत सम्पूर्ण क्षेत्र नै अन्योलग्रस्त बनिरहेको छ । नगरबासीहरुले ठूलो आशा र विश्वासका साथ आफ्ना जनप्रतिनिधि छानेका थिए र पछिल्लो अवस्थामा दे।खिएको नगर भित्रको हरेक गतिविधिमा जनप्रतिनिधिका तर्फबाट नागरिकहरुका समस्यामा कुनै चासो र सम्बोधन नहुनुले नगरबासीहरुको जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वासमा तुषारापात भएको छ ।
तसर्थ निर्वाचित जनप्रतिनिधि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन अधिकारी, नागरिक अगुवा, सञ्चारकर्मी, उपभोक्तवा मञ्च लगायतका जनपक्षिय संघ संस्थाहरुको अगुवाईमा उक्त समस्या समाधानको लागि अग्रसरता देखाउनु आवश्यक छ । खास गरी जनप्रतिनिधिको हैसियत र मुलुकको संघिय संरचनानुसार नगरक्षेत्र भित्रका हरेक समस्या समाधानका लागि नगरपालिका र खास गरि त्यहाँका पदाधिकारीहरुले समयमा नै पहल गरी खानेपानी वितरण तथा शुद्धता फोहोर व्यवस्थापन दल तथा नाली आदी समस्यामा सम्बन्धित निकायको सहयोग र समन्वयमा अग्रहणी भूमिका निभाउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ ।